Efa nohenoiko ny fitarainanao, ary efa hitako ny ranomasonao; indro, hahasitrana anao Aho – FJKM Ambavahadimitafo Efa nohenoiko ny fitarainanao, ary efa hitako ny ranomasonao; indro, hahasitrana anao Aho |
Publié le 12 juin 2022 à 08:06
Alahady 12 jona 2022, alahadin’ny Sekoly FJKM, alahadin’ny Trinite, hibanjinana ny lohahevitra hoe « Mampanjaka ny fahefany ny Tompo« .
Ny mpitandrina Randrianarisoa Alain no nitondra ny hafatr’Andriamanitra avy ao amin’ny 2Tantara 20 : 5 – 9 : « Miverena, ka lazao amin’i Hezekia, mpanapaka ny oloko, hoe: Izao no lazain’i Jehovah, Andriamanitr’i Davida rainao: Efa nohenoiko ny fitarainanao, ary efa hitako ny ranomasonao; indro, hahasitrana anao Aho, ka raha afaka ampitso dia hiakatra ho ao an-tranon’i Jehovah hianao. 6Ary hampiako dimy ambin’ny folo taona ny andronao; sady hamonjy anao sy ity tanàna ity amin’ny tànan’ny mpanjakan’i Asyria Aho; ary hiaro ity tanàna ity Aho noho ny amin’ny tenako sy Davida mpanompoko. 7Ary hoy Isaia: Makà ampempan’aviavy. Ary dia nalainy ka napetany tamin’ny vay, dia sitrana izy.8Ary hoy Hezekia tamin’i Isaia: Inona no famantarana fa hositranin’i Jehovah aho ka hiakatra any an-tranon’i Jehovah raha afaka ampitso? 9Dia hoy Isaia: Izao no famantarana ho anao avy amin’i Jehovah hahalalanao fa Jehovah hanao izay zavatra nolazainy: handroso hàdiny folo va ny aloka, sa hiverina hàdiny folo? «